Ndị na -emepụta ọdụ ụgbọ mmiri & ndị na -ebubata ya | China Dock Ramp Factory
Ụgbọ mmiri China DockA na -ekewa ya n'ụdị abụọ, otu bụ ebe a na -akwagharị ebe a na -akwagharị akwagharị, onye nke ọzọ na -arịgoro yad. Enwere ike idozi ịdị elu nke akụkụ ihu nke ikpo okwu mbata akwa dị ka ịdị elu nke ogige gwongworo si dị, na egbugbere ọnụ ya na -adịkarị nso na ngalaba ahụ.
Ibu ikike: 6 ~ 15ton.Onye ọrụ ahaziri iche. Ogo Platform: 1100*2000mm ma ọ bụ 1100*2500mm. Nye ọrụ ahaziri iche. Valve valvụ: Ọ nwere ike igbochi nrụgide dị elu mgbe igwe na -agbago. Gbanwee nrụgide. Valvụ mbelata ihe mberede: ọ nwere ike gbadata mgbe ị zutere ihe mberede ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ.
Ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic na moto eletriki na -ebugharị ọdụ ụgbọ mmiri kwụ ọtọ. Ejiri ya abụọ cylinder hydraulic. A na -eji otu ebuli ikpo okwu ma ejiri nke ọzọ ebuli igwe nkata. Ọ na -emetụta ọdụ ụgbọ njem ma ọ bụ ọdụ ibu, ịkwakọba ihe wdg.
Vehiclesdị ụgbọ ala niile nwere ike jiri nwayọ gafere akwa ịbanye iji bufee ngwongwo n'etiti ụlọ nkwakọba ihe na ihe a na -ebu. Ọ na -anabata ọnọdụ njikwa otu bọtịnụ, nke dị mfe ịrụ ọrụ. Naanị otu onye ọrụ ka achọrọ ka ọ rụọ ọrụ, enwere ike ibubata ngwa ngwa ma budata ya. Ọ na -eme ka ibu ọrụ na ibubata nnukwu ụlọ ọrụ dị mfe, nchekwa na ngwa ngwa, si otú a na -azọpụta ọtụtụ ọrụ, melite arụmọrụ ọrụ, na inweta uru akụ na ụba kachasị. Ọ bụ akụrụngwa dị mkpa maka imepụta ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ yana mmepe nke mepere emepe na imezi ngwa ngwa ngwa ngwa. Onye ọzọ bụ mgbago ogige mkpagharị, a na -eji ramp ọdụ ụgbọ mmiri a dị ka àkwà mmiri na -agbagharị agbagharị iji na -eme njem site na ala ruo n'ụgbọala mgbe a na -ebu gwongworo. ebutuo. Mmegharị ya nwere ike mezuo ihe achọrọ maka itinye na iwepụ ọrụ na ebe dị iche iche. A na-eji tube nwere akụkụ anọ nke manganese ígwè nwere ike dị elu. A na-eme mkpọda ya site na nchara nchara ezé, nke nwere arụmọrụ mgbochi skid dị mma. A na -emeso elu akụrụngwa ahụ site na ọgbụgba ọkụ na mgbada agbada, a na -ejikwa mgbapụta hydraulic ntuziaka dị ka ike mbuli elu. Achọghị ọkụ eletrik dị na mpụga, nke dị mma maka iji ya eme ihe na ebe na -enweghị ọkụ eletrik.